Nepali Christian Song 2022 | परमेश्‍वरका भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्दछन् | with lyrics | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Nepali Christian Song 2022 | परमेश्‍वरका भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्दछन् | with lyrics
ती दिनहरू समाप्त हुनेछन्,
संसारमा केही चीज रहने छैन,
सबै थोक नयाँ हुनेछन्।
कुनै अस्पष्टता हुने छैन त्यहाँ!
स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ,
तर परमेश्‍वरको वचन सदा रहनेछ!
तिमीहरूलाई फेरी सल्लाह दिनुहुन्छ:
व्यर्थमा नदौड, बिउँझ, पश्चताप गर
मुक्ति नजिकै हुनेछ!
उहाँ तिमीहरूमाझ देखा परिसक्नुभयो।
हो, परमेश्‍वरको आवाज उठेको छ।
आत्मा मण्डलीहरूसँग बोल्नुहुन्छ।
कान हुनेहरूले सुन्नैपर्छ!
सबै जीवहरूले स्वीकार्नै पर्छ!
केवल उहाँको वचन खाऊ र पिऊ,
तिनलाई शंका नगर।
उहाँको वचन सुन्ने र पालन गर्नेहरूले
ठूलो आशिष पाउनेछन्।
हो, परमेश्‍वरको आवाज उठेको छ;
हरेक दिन नयाँ र ताजा नै छ।
तिमीले उहाँलाई-उहाँले तिमीलाई देख्नुहुन्छ,
तिमी उहाँलाई नकार्छौ, उहाँलाई चिन्दैनौ।
उहाँका भेडाले उहाँको स्वर सुन्न सक्दछन्
तर तिमीहरू संकोचमै छौ!
शैतानले तिमीलाई अन्धो बनाउँछ
अनि तिम्रो हृदय कठोर बनेको छ।
त्यसैले परमेश्‍वरको महिमित मुहार हेर्न सक्तैनौ।
कति दयनीय छ यो, अब धेरै नपर्ख!
परमेश्‍वरका भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्दछन्।
सात आत्माहरू परमेश्‍वरको सिंहासन अघि
धर्तीका कुना कुनामा पठाइए।
परमेश्‍वरले आफ्ना दूत पठाउनुहुन्छ
बोल्न सबै मण्डलीहरूसँग,
उहाँ नै मानिसको भित्री हृदय जाँच्ने परमेश्‍वर हुनुहुन्छ।
परमेश्‍वरको मुहार सच्चा रूपमा खोज्नेहरूले
नव ज्योति र अन्तरदृष्टि पाउनेछन्।
उहाँका वचन तिमीकहाँ आएर
तिम्रा आत्मिक आँखा खोल्नेछन्।
तिमीले आत्मिक संसारको रहस्य देख्नेछौ
र उहाँको राज्य मानिसबीच भएको।
केवल शरणमा प्रवेश गर
र सबै अनुग्रह तिमीमा हुनेछ।
तिमीलाई न अनिकाल, न महामारी, न जन्तुले छुने छ।
तिमी परमेश्‍वरसँगै हिँड्नेछौ
र महिमामा सँगै जानेछौ।